Adobe Photoshop CC 2020 - FRANTSAY Interface
Saturday 8 Mey 2021 amin'ny
Navoaka tao amin'ny Darknet, angona fanodinana, Website
Author: FRANTSAY Interface Date Published: 6 Novambra 2020 5 Comments amin'ny Adobe Photoshop CC 2020
Lahatsoratra nohavaozina 5 Desambra 2020 ny 4 H 10 ahy
Download Adobe Photoshop CC 2020 niasa mialoha ho an'ny Windows
Saintsaino miaraka amin'ny Adobe Photoshop 2020.
32 potika, 64 potika
Mpamorona an-tapitrisany, mpaka sary sy mpanakanto erak'izao tontolo izao dia mampiasa Photoshop hanatanterahana izay tsy azo atao. Manomboka amin'ny afisy ka hatramin'ny fonosana, miainga amin'ny sora-baventy fototra mankany amin'ireo tranonkala mahafinaritra, manomboka amin'ny sary tsy hay hadinoina ka hatramin'ny sary masina mahasarika maso, Photoshop mampihetsika ny tontolon'ny famoronana. Miaraka amina fitaovana intuitive sy modely mora ampiasaina, na ny vao manomboka aza dia afaka mamorona zavatra miavaka.
Ny kinova feno dia niasa mialoha
Mitohy ny tontolon'ny famoronana Photoshop
Mpamorona an-tapitrisany, mpaka sary sy mpanakanto erak'izao tontolo izao no mampiasa Photoshop hanao izay tsy azo atao.
Natao ho an'ny rehetra hamolavola na inona na inona;
Manomboka amin'ny afisy ka hatramin'ny fonosana, miainga amin'ny sora-baventy fototra mankany amin'ireo tranonkala mahafinaritra, manomboka amin'ny sary tsy hay hadinoina ka hatramin'ny sary masina mahasarika maso, Adobe Photoshop 2020 activated mitazona ny tontolon'ny famoronana mihetsika. Miaraka amina fitaovana intuitive sy modely mora ampiasaina, na ny vao manomboka aza dia afaka mamorona zavatra miavaka.
Tsy maka sary fotsiny.
Na mitady touch-up isan'andro na fanovana tanteraka ianao, ny rindrambaiko famolavolana sary dia manolotra fitaovana feno fakana sary matihanina hamadika ny tifonao ho zavakanto. hanitsy, crop, mamafa zavatra, mamerina mamerina sy manamboatra sary taloha. Milalao loko, ny vokany ary bebe kokoa hanovana ny olon-tsotra ho zavatra miavaka.
Manaova sary sy mandoko izay nofinofinao amin'ny fitaovana namboarina manokana ho an'ny sary. Mandoko amin'ny endrika simetrika tanteraka. Makà endrika madio amin'ny tsipika malefaka. Ary mamorona amin'ny pensilihazo, penina, marika sy borosy izay toa tena izy – anisan'izany ny mihoatra ny 1000 avy amin'ilay mpanao sary malaza Kyle T.Webster.
Mandoko amin'ny symmetry tonga lafatra miaraka amin'ny maody vaovao ahafahanao mamaritra ny famaky ary mifidy amin'ireo lamina efa voatendry toy ny boribory, radiala, spiral sy mandala.
Fanandramana mameno fahalalana vaovao momba ny atiny
Ny sehatr'asa natokana dia ahafahanao misafidy ireo pixel marina hampiasaina hamenoana, ary Adobe Sensei manamora ny fihodinan'izy ireo, ny scaling sy ny fitaratra.
Ny fitaovana Frame ao Adobe Photoshop 2020 dia navadika
Mamorona endrika na andian-tsoratra hampiasaina ho toy ny placeholder ao amin'ny canvas anao. Tariho ary alatsaho ny sary hamenoana ny frame ary hasiana mari-pototra mifanaraka aminy.
Adobe Photoshop 2020 v21 (X64) mialoha mampandeha
2.5 / 5 kintana (26 View)
7 Mey 2021
5 Mey 2021
1 Mey 2021
Author: FRANTSAY Interface Date Published: 8 Novambra 2020 Mametraha hevitra on Shortcode sur méta-titre de WordPress
Navoaka tao amin'ny angona fanodinana Website
5 thoughts on "Adobe Photoshop CC 2020”
SABARY hoy i:
21 Desambra 2020 amin'ny 11 H 38 ahy
22 Desambra 2020 amin'ny 14 H 54 ahy
Nakmuay hoy i:
24 Novambra 2020 amin'ny 22 H 36 ahy
25 Novambra 2020 amin'ny 0 H 54 ahy
Rehefa avy nanamarina, il y a bien un problème sur la copie logiciel.
27 Novambra 2020 amin'ny 11 H 09 ahy